शान्ति सम्झौता र संविधान उल्लंघनलाई बोल्ड निर्णय भन्ने ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०९:३० English
शान्ति सम्झौता र संविधान उल्लंघनलाई बोल्ड निर्णय भन्ने ?
देव गुरुङ, नेकपा माओवादी बैद्य पक्ष नेता
० शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्ने भयो नि ?
– शान्ति प्रकृया भनेको संविधान निर्माणलागयत १० वटा प्याकेजको कुरा हो । वृहद शान्ति सम्झौताले उल्लेख गरेको १० बुँदे प्याकेज हो । त्यो १० बुँदे सम्झौता एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भने शान्ति प्रकृया टुगिने हो ।
० टुगिने लागेको होइन र ?
– सेना समायोजन भनेको शान्ति प्रकृयाको एउटा अंश मात्रै हो । वृहद शान्ति सम्झौताअनुसार सेना समायोजन एउटा बुँदा हो, समग्र होइन । दोस्रो कुरा अहिले जुन प्रकृयाबाट समायोजना भइरहेको छ, त्यो समायोजना नभएर समर्पण भइरहेको छ ।
० लडाकूले पार्टी निर्णयलाई स्वागत गरेर गइरहेका छन् त ?
– कोही खुशी, जबर्जस्ती भन्दा पनि वृहद शान्ति सम्झौता र आन्तरिम संविधानले समायोजनबारे गरेको परिकल्पना भन्दा विपरित दुई शक्तिको बीचको सहमतिअनुसार समायोजनको प्रकृयामा जानुपर्नेमा एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई बन्दक बनाएर लिने ढंगले सरकार निर्णय गरेको छ । निसशस्त्रीकरण गराएर योग्यताको आधारमा भर्ती गर्ने मोडलबाट समायोजन प्रकृया भएको छ । यो भनेको वृहद शान्ति सम्झौता, आन्तरिम संविधान र विगत कालमा नेताहरु सहमति गर्दै आएका विषय र मूल्य मान्यता भन्दा पनि प्रतिकूल रहेका छन् ।
० सात बुँदे सम्झौताअनुसार नै भएको होइन ?
– पहिलो कुरा साँत बुँदे सम्झौताले नै वृहद शान्ति सम्झौता र आन्तरिम संविधान एक हदसम्म उल्लंघन गरेको छ । दोस्रो कुरा त्यहीअनुसार महानिर्देशनालय गठन गरिने, नेतृत्व निर्माण गर्ने, महानिर्देशनालयमा कुन कुन फोर्सबाट कत्ति रहने भन्ने कम्पोजिसन तयार भइसकेपछि त्यसको कार्यविधि गठनादेश हुनुप¥र्यो । यी सबै कुरो टुंगो भएपछि महानिर्देशनालयमा क्यान्टोनमेनमा रहेका दुवैथरि हतियार महानिर्देशनालय मातहतमा जाने कुरा हो । त्यसो नगरेर एउटा फोर्सको मातहतमा रहेको सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरु र चेन अफ कमाण्ड सर्लक्कै अर्को फोर्सलाई सुम्पिनु भनेको यो दुनियाँमा नभएको समायोजनको मोडल हो । यो आत्मसर्पणको मोडालिटी हो ।
० शान्ति विरोधी नेपाली जनता देखाउन सक्नुहुन्छ ?
– शान्तिविरोधीको कुरै आएको छैन । शान्तिको नाममा संविधानको ठाटो उल्लंघन गर्न पाउँछ ? त्यसो हो भने किन चाहियो अन्तरिम संविधान ? जलाइ दिए भयो नि, च्यातिदिए भयो नि । लोकतन्त्रमा विविधको शासन लागू गर्नुपर्छ भन्ने, विधि एकातर्पm छ, राज्य स्वयंले निर्णय गरेर अर्कोतर्फ कुद्न पाइन्छ ।
० अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्ड निर्णय गरेँ भन्नुभयो नि ?
– शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान उल्लंघन गर्ने कुरालाई बोल्ड निर्णय भन्ने हो भने मुलुकको स्थिति कहाँ पुग्छ । यस्तै हो भने संविधान विहिन खालको स्थितिमा देश पुग्नकि पुग्दैन । ०६३ को आन्तरिम संविधानको धारा १४३ को के अर्थ रह्यो ? विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम भएन ?
० विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम तपाईंहरुले गर्नुभयो अरे नि ?
– हामीले कसरी उठाउने ? हामीले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भन्दा विधिको शासनको खिल्ली उडाएको हन्छ ?
० तपाईंहरु संविधान चाहनुहुन्न ?
– संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने कुरा त्यत्तिकै डेडलक भइरहेको छ । अहिलेसम्म एउटा अन्तरवस्तुमा सहमति भएको छैन, अहिलेसम्म ।
० तपाईंकै कारणले डेडलक भएको हो नि ?
– कसरी हाम्रो कारणले हुनु ?
० उपसमितिमा निर्णय गर्नुहुन्छ, संवैधानिक समितिमा गएर विरोध गर्नुहुन्छ ?
– नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनेको या त प्रकृया अगाडि बढाउनु प¥र्यो या अन्तरवस्तुमा सम्झौता गरेर अघि बढ्नुप¥र्यो । अहिलेसम्म कुन चाहिँ बुदामा लेनादेना भएको छ ।
० लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको काम अघि बढ्यो भनिरहेका छन् नि कांगे्रस एमाले ?
– संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढ्ने क्रममा जनताको अपेक्षाअनुसार साढे २ वर्षसम्म राज्यद्वारा विस्थापित गरिएका समुदायहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्ने संविधान बनाउनुपर्छ । त्यो अधिकारलाई विस्थापित गरिएको संविधान त धेरै थिए ।
० कस्तो संविधान जारी गर्न चाहनुहुन्छ ?
– कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुराका लागि ०६५ सालमा हामीले मस्यौदा जारी गरेका छौं नि । त्यही बेला एकीकृत मस्यौदा जारी गरौं भनेर दसौंपटक भन्दा किन मान्दैन ?
० शान्ति र संविधानको सडकमै आएर किन विरोधी ?
– सडकमा आउँदैमा शान्ति र संविधानको विरोधी हुन्छ ? विरोध गर्न नदिने भनेको तानाशाह र निरंकुश प्रवृत्ति हो । विरोध गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा तानाशाहले मात्र भन्ने गर्छन् ।
० सडकमै आएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउनुपर्छ ?
– लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने शैली हुन्छन् ।
० आप्mनै पार्टीको पुत्ला जलाएको उदाहरण संसारमा काही छ ?
– कसको गरेको छ, कसको गरेको छैन भनेर यो पार्टीभित्रको मामला बनेन यो चाहिँ । के गर्दा अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिले सही ढंगले निकास पाउँछ । विगत कालमा गरेको सन्धी सम्झौताहरुको मूलभूत मर्मलाई फलो गर्दै कसरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ, कुरा त्यहाँपो हो त । यहाँ संविधानको उल्लंघन भयो भन्दा शान्ति प्रकृयाको विरोधी हुनसक्छ ।
० तपाईंहरुले नै बनाएको प्रधानमन्त्री बाबुरामको पुत्ला जलाउन मिल्छ ?
– राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनलाई हामीले बाबुरामलाई सहयोग गरेका थियौं । केन्द्रीय समितिको दस्तावेज हेर्नुहोस् । मधेशी मोर्चासँग सम्झौता गरेर बहुमतको सरकार बनाउने भनेर काहिँ लेखेको छ ?
० बाबुरामको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नुभयो ?
– चार बुँदे सम्झौता गरेर कसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ ?
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जान तपाईंहरु तयार ?
– राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन ? मूल प्रश्न त्यो हो । पहिलो राष्ट्रियताको मुद्दामा सहमति हुनुप¥र्यो नि । अनुहार हेरेर दुई खुट्टामा मान्छे उभिएको भरमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ? चार बुँदे सहमति खारेज गर्नुप¥र्यो, बिपा सम्झौता खारेज गर्नुप¥र्यो ।
० खारेज भएन भने के गर्ने ?
– राष्ट्रियता विरुद्धको मुद्दामा विगतकालमा जे जति सम्झौता गरेका छन्, त्यो खारेज हुनुपर्छ । कम्तीमा बेठीक भयो भनेर समीक्षा त गर्नुपर्छ नि ।
० शान्ति र संविधानको जनमत बिथोल्ने काम गर्नुहुन्न ?
– बिथोल्ने र नबिथोल्ने प्रश्न होइन यो । हामीलाई शान्ति विरोधतिर डाइभर्ट नगर्ने ? १ सय ८० डिग्रीको कोणमा हाम्रो कुरा डाइर्भट गर्ने ? यो भनेको निरंकुश तानाशाहले उठाउने प्रश्न हो ।
० तपाईं शान्ति विरोधी होइन ?
– के भनेर मलाई शान्ति विरोधी भनेर प्रश्न उठाउनुभयो ? संविधानको पालना भएन भन्दा शान्ति विरोधीसँग लगेर जोड्ने ?
० अहिले सडकमा हुनुहुन्छ नि तपाईं ?
– सडकमा जानुभनेको प्रजातान्त्रिक अधिकारको कुरा हो । सडकमा जादैमा शान्ति विरोधी हुन्छ ?
० सहमति सम्झौताको पनि विरोधी हुनुहुन्छ ?
– संविधान विपरित सहमति भयो, सम्झौता भयो भन्दैमा कसरी शान्ति विरोधी हुन्छ ? अन्तरिम संविधान र वृहद् शान्ति सम्झौताभन्दा अलग ढंगले हिड्ने कसैलाई अधिकार छ ? यस्तो स्थिति मुलुकमा अराजकता फैलिदैन ? संविधान त खोस्टा भयो भने के अर्थ रह्यो ?
० जेठ १४ मा संविधान आउँछ ?
– जनताको अपेक्षाअनुसारको संविधान आउँनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यही गतिमा जाने हो भनेदेखि जनताको अधिकारलाई कुठाराघात गर्ने हो भने ०४७ सालको एक थान संविधानलाई भाषा परिमार्जन गरेर विदेशीले तयार गरिदिएको ड्राप्mट जारी गर्ने प्रकृयामा पुग्न सकिने कुरामा अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
० त्यस्तो संविधान ल्याउन दिनुहुँदैन ?
– ६ सय १ जना सभासदले बनाउने संविधानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । विदेशीहरुले कुनै अध्यारो कोठामा तयार गरेर नेताहरुको सहीछाप गराउने खालको राष्ट्रघाती संविधान स्वीकार हुँदैन ।
३० चैत्र २०६८, बिहीबार ११:४८ मा प्रकाशित